IOS 9 waxay la socotaa wararka: Siri iyo Spotlight oo si weyn kor loogu qaaday | Wararka IPhone
Waxaa la gaadhay waqtigii laga hadli lahaa IOS 9, marka hore in la muujiyo korsashada 83% ee uu iOS 8 lahaa, taas oo ka duwan noocii ugu dambeeyay ee tartanka, waana taas tan ugu dambaysa ee Android ay heshay xog korsasho qosol ah 12% marka la barbar dhigo. nidaamka hawlgalka mobilada ee Apple. In Actualidad iPhone waxaan kuu sheegeynaa dhammaan wararka WWDC 15 isla markaaba kuwana waa kuwa ku xiran iOS 9.
Ugu horreyntii Siri, sidii aan horeyba u tirineynay, koodhkeedii ayaa dib loo qoray markii saddexaad, si kastaba ha noqotee, hadda in ka badan dib-u-habeyn ayaa lagu sameeyay isbeddel ku yimid shaqooyinka. Hadda Siri wuxuu noqday 40% ka dhakhso badan nooca laga heli karo macruufka 8, wax maskaxda lagu hayo marka la raadinayo. Dhinaca kale, sida aan ku arki karno sawirka, animation soo dhaweynta Siri ayaa lagu beddelay mid leh midab yar. Sannadkii hore Siri waxay heshay in ka badan hal bilyan oo su'aalood bishii, taas oo caddaynaysa inay jiraan dad badan oo adeegsada kaaliyaha macmiilka ee Apple. Hadda Siri wuxuu noo soo jeedin doonaa talooyin la xiriira macluumaadka laga yaabo in nalaga soo ururiyey si nolosheenna looga dhigo mid fudud. waxaan sidoo kale ku qaadi karnaa baaritaano qaas ah sawirada si fudud oo loo maro Siri.
Gacanta ku haysashada macruufka 9 sidoo kale waxay keeneysaa horumarinno toos ah oo muhiim ah, si loo bilaabo, tilmaanta bilaabista ayaa noqotay isbadal dhanka midigta ah oo ku saabsan SpringBoard. Barta bartamaha ubaahantahay horumarin halkaana waa timid, hada waxaa kujiraa baaritaano dagdag ah sida aan uqoreyno, xisaabinta iyo iskudhafka codsiyada-saddexaad Dhinaca kale, faahfaahin ahaan, markii la isku xidhayo sameecadaha dhagaha ee iPhone-ka ayaa noo soo bandhigi doona muusig aan dhegeysanno, waxaan si fudud ku qasbanaan laheyn inaan ku riixno ciyaar ku saabsan xakamaynta qaababka badan ee shaashadda qufulka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » IOS 9 waxay la timaadaa warar: Siri iyo Spotlight si weyn ayaa loo hagaajiyay
IOS 9 ayaa keydin doonta batteriga waxaana lagu rakibi karaa iPhone 4S